ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များလာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက် တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့သို့ အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံ တက်ရောက်ရန်နှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိ | Pyithu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mme Pany YATHOTOU ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ချစ်ကြည်ရေးခရီးလည်ပတ်ရန်နှင့် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ တက်ရောက်ရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသော ဦးလှမြင့်ဦး၊ ဒေါက်တာစိုးရင်၊ ဦးဇော်မြင့်ဖေ၊ ဦးခင်မောင်ရီ၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးညွန့်လှိုင်၊ ဦးဝင်းသန်း၊ ဒေါ်ရီရီမြင့်၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံးနှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၄၅၅ နာရီအချိန် လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာ လာရာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ သုဝဏ္ဏဘုမ္မိလေဆိပ်သို့ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၇၀၀ ချိန်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ လေဆိပ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမောင်၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) စစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ချစ်ဆွေ နှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့် လွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်များသည် လေကြောင်းခရီးဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာလာရာ လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့၊ Wattay International Airport သို့ ဒေသ စံတော်ချိန် ည ၂၀၅၀ နာရီချိန် တွင် ရောက်ရှိ ကြပြီး လေဆိပ်၌ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Hon. B.G Vilay Duangmany ၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်းနှင့် ငွေကြေးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Hon. Dr. Mrs. Buakham Thipphavong နှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက် တစ် သမ္မတနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးဝင်းနှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများက Wattay International Airport တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။